Beesha Caalamka oo baaq kale u dirtay Farmaajo iyo DG | KEYDMEDIA ONLINE
Doorkii Beesha Caalamka ayaa wiiqmay, wuxuuna hadda ku ekaaday baaqyo iyo in qoraalllo lagu taageerayo Farmaajo soo saaraan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wakiiladda Beesha Caalamka u fadhiya Soomaaliya ayaa soo saarey qoraal maanta kaasoo ay ku soo dhaweeyeen wadahadallada u socda DF iyo Musharixiinta Mucaaradka, oo wajigiisa labaad shalay ka dhacay Muqdisho.
Kadib shirkii 25kii Febraayo, Saaxiibada Beesha Caalamka waxay ka codsadeen Rooble iyo Gollaha Musharixiinta Madaxweynaha inay heshiis ka gaaraan arrimaha la isku hayo, ee la xiriira doorashooyinka.
Sidoo kale, waxay ugu baaqeen Farmaajo iyo madaxda Maamullada inay qabtaan shir-madexeedkii la qorsheeyay maalmaha soo socda si loo xaqiijiyo qorsheyaasha fulinta ee heshiiskii 17kii Sebtember, loona soo gabagabeeyo dib u eegista soo-jeedintii Guddiga Farsamada ee 16kii Febraayo si geedi-socodka doorashada uu u bilaawdo iyadoo aanay jirin dib u dhac dambe.
Qoraalkan ayaa soo baxay Saacado kadib markii Rooble iyo Musharixiinta ay shalay kulmeen, kadibna ay dhiseen labo gudi oo ka shaqeeya banaanbaxa Mucaaradka iyo baaritaanka dhacdadii lagu weeraray Madaxda hore 19-kii Febraayo.
Doorkii Beesha Caalamka ayaa wiiqmay labadii sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii la eryay wakiilkii QM Nickolas Haysom 2029, wuxuuna hadda ku ekaaday baaqyo iyo in qoraalllo lagu taageerayo Farmaajo soo saaraan.